The Fate Of Stub Articles On Wiki - The Semalt Answer
Wikipedia ndiyo inonyanya kukosha yekupa rusununguko rusununguko kune ruzivo rwakakwirira rwemarudzi ose kuvashandi vanobva kunyika yose. Wiki inobatanidza nyaya dzakasiyana-siyana dzezvidzidzo uye pfungwa dzezvematongerwo enyika. Munguva ichangopfuura, Wiki vashanduri uye vanozvipira vakaramba vachikakavadzana pamusoro pokubviswa kwemashoko matatu akareba kwenguva yakareba pamusoro pewebsite ye Wikipedia.
Julia Vashneva, iyo Semalt Mutungamiri Akabudirira weVatengi, anoti imwe nyaya pamusoro peproteine ​​yeropa "Hemovanadin" ndiyo yaiva musoro wekukurukurirana mushure mevamwe vatungamiri vakatanga chirevo chinotsigira kubviswa kwechikamu che Wikipedia. Maererano naJohn James, nyaya yacho yakave yakadzorerwa pawebsite - temperature monitoring for pc. "Hemovanadin" ishoko rakanyatsogadziriswa nesayenzi iyo inonyanya kukosha kuvadzidzi nevadzidzi.
Andrea James aireva kuti "Hemovanadin" nyaya yakanga ichitarisana nehurukuro yakanyanya ye Wiki yakanzi "kuregererwa." Kubvisa ruzivo rwakakosha kubva kune Wikipedia chinhu chakanyanya kutyisidzira munharaunda yezvidzidzo inoshandisa Wiki seyo huru yekutsvaga. Kwemakore anopfuura 14, Wikipedia yave ichipa ruzivo rwakanaka kune vatengi vanoshanyira nzvimbo yacho zuva rega roga kuti vawane zivo.
Kunzwisisa kuti Wikipedia inoshanda sei
Deletionism ndedzidziso yakaoma inogona kungonzwisiswa nekuve nekutevera hurongwa hwekushandiswa kwe Wiki. Wikipedia inotungamirirwa nenharaunda ine vazvipiri nevatori vanoisa mitemo nemirayiridzo inotungamirira kushandiswa kwe Wikipedia. Vanyori vanogadzira uye vanogadzira nyanzvi dzezvinyorwa zviripo pane Wiki.
Kuti iiswe pa Wikipedia, maonero evanhu anofanira kusangana nemitemo nemitemo.Asi zvakadaro, zvinotenderera zvinowirirana zvichienderana nehurukuro.Semuenzaniso, mumunda wevadzidzi, maitiro asina kuonekwa anooneka. Mune dzimwe nzvimbo, kugadziridza nekubviswa kwezvinyorwa kunopesana zvichienderana nevanoratidzi vevashanduri, izvo zvaive zvakadaro ne "Hemovanadin" nyaya.
Wikipedia inoshandiswa pamusana pekuti vanozvipira vanonzwisisa mazano uye mirayiridzo. Zvisinei, vakadaro vanozvipira vanoshandura mitemo yacho zvakasiyana-siyana, mamiriro ezvinhu ezvinhu zvinotungamirira kuderedza. Vatungamiri vakazvipira uye vashandi vakazvitsaurira vanoshandira hupenyu huno. Zvisinei, vanhu vanoita zvikanganiso, saka vanoita Wikipedians.
Hemovanadin muenzaniso wehurukuro yaive yakabatanidzwa pa Wikipedia chete kuti ishandiswe nekugadziriswa gare gare. Kunyange zvakadaro, kusaremekedzwa mitemo kunofanira kugadzirirwa kuvhara kuiswa kwezvinhu zvedzidzo izvo zvinokundikana kugadzirisa mitemo. Kufukura zvinhu zvakanyorwa kunonyanya kusununguka kana kuchienzanisa nokusika nyaya itsva. Kubvisa zvinyorwa zvakasikwa nevatsva vatsva zvinogona kunge zvichinyadzisa, kunyanya kana kusununguka kuchiitika uye vanyori havanzwisisi kuti sei nyaya dzavo dzakabviswa kubva ku Wiki.
Nhamba yakanaka yezvinyorwa zvinotarisana nemikoro miviri. Kuita shanduko dzakawanda kwazvo kune chikamu chakasiyana chinoshandura chirevo chepakutanga chemashoko. Parizvino, vaongorori vakaita mipiro inofunga mupfungwa kuti nekuda kwekuti imwe nyaya ine zvinyorwa zvitsvene, haisati yasangana nemitemo isingazivikanwi. Heano mazano pamusoro pekuti mabhuku akaoma angagadziriswa sei kuti arege kubviswa.
Rongedza miti yakadzika zvichienderana nenyaya
Kuvandudza nekuraira zvinyorwa zvekuwedzera
Kutanga kwemavara akasiyana-siyana kuratidzira hutano hunoendesa kune zvinyorwa
Inoretically, kuwedzera ruzivo rwakakosha kune zvinyorwa zvakanyanyisa zviri nani kupfuura kubvisa nyaya yose kubva ku Wiki. Chirevo chechinyorwa chinokoshawo. Stub zvinyorwa zvisingafananidzi maitiro ezvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa zviri pangozi yekutarisa kubviswa.